Famonjena olona hafa kely :: Lehilahy marary saina nampidinina teny amin’ny andrin-jiro - ewa.mg
News - Famonjena olona hafa kely :: Lehilahy marary saina nampidinina teny amin’ny andrin-jiro
Avotra soa aman-tsara ny lehilahy iray voalaza fa tsy salama saina, teny Anosizato, omaly. Nianika teo ambony andry vy lehibe mitondra herinaratra tena matanjaka an’ny orinasa Jirama izy. Soa fa haingana ny fanapahana ny herinaratra nataon’ny Jirama ho fisorohana ny zava-doza mety nitranga. Niantsoana ny ekipan’ny sampana mpamonjy voina mihitsy ny fanavotana an’io lehilahy io.
Tsy maintsy nirosoana ny fanapahana ny famatsiana herinaratra noho ity tranga tsy dia fahita ity. Efa tafanika teny ambonin’ilay andry vy lehibe mirefy dimampolo metatra eo ho eo sady andalovan’ny tariby mihitsy ilay lehilahy. Nitangorona ny olona. Tapaka naharitra adiny roa teo ho eo ny herinaratra mifandray amin’ io andry vy lehibe io tamin’ny faritra maromaro, nanomboka teny Ampitatafika, Itaosy, Ambohidrapeto sy ny manodidina, amin’ny vahilava, Andranoro, Ambohibao sy ny manodidina, Andraharo sy ny manodidina, 67Ha, Isotry ka hatrany Isoraka sy ny manodidina, araka ny fanambaràna nataon’ny orinasa Jirama, vantany vao tsikaritra ny zava-niseho.
Feno hakingana ny asa famonjena nataon’ireo mpamonjy voina, toy ireny fahita amin’ny horonantsarimihetsika ireny mihitsy. Nilàna fitandremana ihany koa mantsy ny fanavotana an’ity lehilahy tsy salama saina avy teny ambonin’ny andry vy lehibe.
Nofatoran’izy ireo ny tanana ilany sy ny tongotra ilan’io lehilahy io. Nifampisintonana ireo kofehy roa mba tsy hampifandringotra azy eny ambony eny. Toy ny natoraka hidina ilay lehilahy saingy tsy mianjera fa manaraka moramora ireo kofehy hatraty ambany. Tsy nisy aina nafoy na naratra nandritra izany rehetra izany, ary nampisehoan’ny mpamonjy voina ny fahaizany tamin’ity tranga teny Anosizato, omaly, ity.
L’article Famonjena olona hafa kely :: Lehilahy marary saina nampidinina teny amin’ny andrin-jiro est apparu en premier sur AoRaha.
Rugby vehivavy: marary ny Me Andry, mpanazatra ny Makis
Vokatry ny havizanana tafahoatra, tratry ny tsy fahasalamana ny mpanazatra ny Makis de Madagascar sokajy vehivavy, Andrianantenaina Imboasalama (Me Andry). Efa ho iray volana izay ny nankarary azy ka nidirany hopitaly. Ankehitriny, efa nivoaka ny tobim-pahasalamana ny Me Andry ka manaraka fitsaboana any an-tranony.Manoloana izany, tsy nitazam-potsiny ny Malagasy rugby fa nitondra izay voatsirambin’ny tanany. Ny talata lasa teo, teny Ankorondrano, nanolotra fanafody, izay tsy maintsy mbola hohanin’ny Me Andry ao anatin’izao fanarahany fitsaboana izao, izy ireo. Anisan’izany ny calcium sy ny vitamine, manome hery sy tanjaka. Ankoatra izay, nisy koa lelavola nomena azy hanampiany amin’izay tokony hilàna azy. Nirary fahasalamana ho azy ny tomponandraikitry ny Malagasy rugby mba hiverenany indray eo anivon’ny baolina lavalava. Marihina fa tsy mbola afaka manao asa mafy izy fa mila fialan-tsasatra maharitra. Tsiahivina fa mpanazatra vatana sady manampy ny Me Eric Sefo, ao amin’ny Makis VII sy ny XV vehivavy ny Me Andry. Nisaotra sy nankasitraka ny fihetsika nataon’ny Malagasy rugby ny Me Andry izay tsy nanadino na nanary azy tao anatin’izao fahasahiranana ara-pahasalamana mahazo azy izao. “Andriamanitra manankarem-pahasoavana, hamaly fitia anareo”, hoy izy. Tompondaka L’article Rugby vehivavy: marary ny Me Andry, mpanazatra ny Makis a été récupéré chez Newsmada.
Mozika mafana: misesisesy ny vokatra vaovaon’i Tence Mena
Mpanakanto manohy hatrany amin’ny asa famoronana. Mitondra zava-baovao tsy tapaka ho an’ny mpanjifa. Tence Mena, manana ny lazany eo amin’ny tontolon’ny hira malagasy. Miala any ny vazo vaovao “Tompom-bady”.Mihamaro ny mpanakanto mpanao mozika tsy voasarika loatra amin’ny famoahana rakikira. Antony, mihasarotra ny ady amin’ny mpanao piraty, indrindra noho ny fahamaroan’ny fitaovana iparitahan’ireny hira ireny. Na izany aza, tsy voasakana kosa ny famokarana vazo vaovao, toy ny ataon’i Tence Mena. Tato anatin’ny fotoana vitsivitsy izay, nisesisesy ny fivoahan’ny hira vaovaony ary mbola hitohy izany.Araka ny fanazavan’ny mpikarakara ity mpanakanto ity, hivoaka amin’io herinandro io ny “Tompom-bady”, tsy mifanalavitra amin’ny voalaza ao anatin’ilay hira “Tompon-tanàna” ny voalaza ao anatin’ity hira vaovao ity, saingy tsy nasiana sarin-teny fa novantanina avy hatrany ny resaka na ny tian-kambara. Eo amin’ny gadona indray, mbola notazonina hatrany ny nampiavaka ireo hirany taty aoriana, toy ny “Sitrany solo” sy ny “Anao Ex”.Aorian’ny fivoahan’ity vokatra vaovao ity, hiverina hitety faritra samihafa indray ry Tence Mena, izay nitondra fialan-tsiny ho an’ny mpankafy any Tsiroanomandidy, tamin’ny tsy nahatontosan’ny hetsika tany an-toerana, noho ny fahoriana teo amin’ny fianakavian’ity mpanakanto ity. Azo lazaina ho efa feno ny fandaharam-potoan’ny tarika, hatramin’ny faran’ity taona ity, araka ny voalazan’ny mpikarakara hatrany. Nampanantena izy ireo fa hanome tombony ny mpankafy eto an-tanindrazana, amin’io faran’ny taona io, fa tsy mikasa ny hivoaka any ivelany.Landy R. L’article Mozika mafana: misesisesy ny vokatra vaovaon’i Tence Mena a été récupéré chez Newsmada.
COVID-19: Ireo paik’ady hitsinjovana ireo olona marefo
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Ireo paik’ady hitsinjovana ireo olona marefo » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.https://web.facebook.com/minsanp/videos/2524260031219371/L’article COVID-19: Ireo paik’ady hitsinjovana ireo olona marefo a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Fanakorontanana 2009 : Niaiky Rajoelina fa izy no nibaiko
“Rehefa niantso an’i Norbert Lala Ratsirahonana izay teo akaikiko teo i Lalao Ravalomanana hoe aza kitihina ny tranonay, dia izaho mihitsy no nandefa mpitandro filaminana nandeha niaro ny tranon’izy ireo”, io no nambaran’i Andry Rajoelina ny sabotsy teo tamina fandaharana iray nivahinianany. Fanontaniana voalohany mipetraka dia ny hoe, iza izany no afaka nibaiko tamin’izany fotoana izany. Mazava be ny valiny fa i Andry Rajoelina, izany no anton’ny fahapotehan’i Madagasikara. Hiaraha-mahita tokoa fa tsy voakitika ny tranon-dRavalomanana teny Faravohitra, satria dia izy no nibaiko ireo mpandrava sy mpanakorontana tamin’ireny fotoana ireny. Manerana an’i Madagasikara dia simba tsy nisy noraisina avokoa ny orinasa Tiko, satria izy no nibaiko izany. Tsy izay ihany fa fototry ny fahamaizan’ny vakoky ny firenena i Andry Rajoelina, satria dia potika tsy misy noraisina ny radiom-pirenena RNM sy ny televizionim-pirenena TVM tamin’izany fotoana izany. Na ireo avy amin’ ny fikambanan’ny niharam-boina AV7 aza, miala aminy amin’izao fotoana izao, satria izao vao mahatsapa fa notaritina natao sorona teny Ambohitsorohitra. Taorian’ny fanambarana nisesisesy tokoa mantsy, mbola tsy nahitana AV7 nilaza ny fanohanany an-dRajoelina mihitsy. Nefa dia ireny olona ireny no nahazoany fitondrana, ka naha filohan’ ny Tetezamita azy. Azo lazaina izany fa fitaovana avokoa ny rehetra amin’i Andry Rajoelina, ka rehefa mibaiko izy na aina aza dia azo potehina. Loza mitatao ho an’ ny firenena ny fiavian’ny olona tahaka an-dRajoelina, hiverina hitondra indray ny firenena. Rariny loatra ny mpifanandrina aminy raha hilaza fa mpanangana fa tsy mpandrava, satria manamafy ny fahamarinan’io voalaza hoe mpandrava io ny filazany, fa izy no nanome baiko hamotika. Mila fanarenana amin’ny lafiny rehetra ny firenena, ka olona mendrika izany no andrasan’ny Malagasy amin’izao fotoana izao. Fanarenana foto-pisainana, fomba fanao, toetra ary indrindra ny fanarenana ny ara-tsosialy sy toe-karena no ilaina. Olona manome baiko hanarina izany no andrasana indray hitondra an’i Madagasikara, fa tsy olona manome baiko handrava tahaka ny tamin’ny 2009. Iratra Raitra L’article Fanakorontanana 2009 : Niaiky Rajoelina fa izy no nibaiko est apparu en premier sur .L’article Fanakorontanana 2009 : Niaiky Rajoelina fa izy no nibaiko a été récupéré chez Triatra.
Tsy ho sahirana intsony ny polisim-pirenena rehefa misy raharaha momba ny sinoa. Polisy miisa 80 nahazo fampianarana teny sinoa maimaim-poana noho ny fiarahamiasan’ny sampandraharahan’ny fiofanana sy ny fikarohana (DFCR) ao amin’ny ministeran’ny filaminam-bahoaka sy ny sekoly « for twelve school ». Notontosaina omaly 21 mey 2019 ny famoahana ny andiany voalohany tamin’ireo mpiofana. Polisim-pirenena 26 no nozaraina diplaoma tamin’io fotoana io. Nandritra ny efa-taona izy ireo no nianatra ary efa mahay mamaky, miteny ary manoratra teny sinoa ary ambony ny fahaizan’izy ireo rehefa avy nandalo fanadinana teny amin’ny “Institut Confucius”, eny amin’ny oniversite Antananarivo, araka ny fanazavan’ny tale mpanorina ny sekoly “for twelve school”, Razafindrainibe Andrianirina. Nambarany fa nanomboka tamin’ny taona 2015 ny fiarah-amiasan’ny roa tonta ary nohavaozina indray izany tamin’ny alalan’ny fifanaovan-tsonia. Manome fiofanana ny mpitsara, ny zandary ihany koa ny sekoly “for twelve school”. Nambaran’ny tompon’ny sekoly fa nipetraka tany Allemagne ny tenany ary resy lahatra tamin’ny fahaizan’ireo mponina tany maneho ny fitiavan-tanindrazana. Ka izany no nodiany teto Madagasikara mba ahafahany manao tahaka izany. Ohatra iray hita maso ity fampianarana maimaim-poana ny teny sinoa ity. Lynda A. Cet article FIARAHAMIASA AMIN’NY “FOR TWELVE SCHOOL”: Polisim-pirenena 26 mahay mifehy ny teny sinoa est apparu en premier sur déliremadagascar.
Analamaizina – Miandrivazo: taksiborosy notafihin’ny dahalo, Sinoa iray maty voatifitra
Sinoa iray maty tsy tra-drano. Io ny vokatry ny fanafihan-dahalo nitranga tao Analamaizina, distrikan’i Miandrivazo, omaly tamin’ny 2 ora sy 30 mn maraina. Taksiborosy hihazo an’i Morondava ny niharan’ny fanafihan-dahalo… Tao amin’ny toerana antsoina hoe Analamaizina, distrikan’i Miandrivazo, ny nitrangan’ilay fanafihan-dahalo namoizana ain’olona. Araka ny loharanom-baovao voaray, tratran’ny fanafihan-dahalo ny taksiborosy iray hihazo an’i Morondava. Miisa efatra ireo taksiborosy nanao dia miaraka niainga avy aty Antananarivo hihazo an’i Morondava ka voatafika teo amin’io toerana voalaza etsy ambony io ny iray amin’ireo taksiborosy ireo. Tsy toy ny fahita andavanandro hoe nanao sakan-dalana tamin’ny vatan-kazo na vatobe teo afovoan’ny arabe ireo dahalo fa nitora-bato avy hatrany. Niraradraraka ny tora-bato nandritra ity fanafihana ity. Voan’ny tora-bato teo amin’ny lohany ny mpamilin’ilay taksiborosy iray nitari-dalana mialoha. Vokany, nivadika tany amin’ny sisin-dalana ilay fiara. Tsy vitan’izay fa nitifitra tamin’ny basy ihany koa ireo dahalo ka nahavoa ilay teratany sinoa iray nipetraka teo akaikin’ny mpamily. Namaly tifitra avy hatrany ny zandary nanara-dia ireto fiara taksiborosy ireto ka lasa nitsoaka avy hatrany ireo olon-dratsy. Tsy nahazo na inona na inona kosa ireo dahalo. Olona enina hafa kosa naratra ka nentina haingana namonjy toeram-pitsaboana. Tsy vao izao fa matetika ahitana trangana fanafihan-dahalo mpanakan-dalana iny RN 35 mihazo an’i Morondava iny. Misy hatrany ireo zandary manara-dia miambina ireo taksiborosy, saingy manao ny ataony hatrany ny dahalo. Mitohy ny fanadihadian’ny zandary momba ity raharaha ity. J.CL’article Analamaizina – Miandrivazo: taksiborosy notafihin’ny dahalo, Sinoa iray maty voatifitra a été récupéré chez Newsmada.
Fandraharahana ambanivohitra: hanampy voka-bary 500 000 t amin’ny taona 2020
Anisan’ny veliranon’ny filoham-pirenena sy ao anatin’ny Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE) ny fahavitantena amin’ny sakafo sy ny haha sompitra an’i Madagasikara aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Ilaina ny fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina hanatrarana izany.Natao, omaly, ny atrikasa hamolavolana ny paikady amin’ny fandraharahana ambanivohitra (agri-business) ho an’ny fambolena. Niarahan’ny fanjakana sy ny mpandraharaha tsy miankina, hanatrarana ny fahaleovantena amin’ny sakafo. Anisan’ny tanjona ny hamokarana vary akotry 500 000 t (ho lasa vary fotsy 325 000 t) fanampiny, ankoatra ny efa vokarin’i Madagasikara isan-taona. Farafahakeliny koa, hisy katsaka 300 000 t hamatsy ireo orinasa mpanodim-bokatra mifototra amin’ny katsaka eto an-toerana sy hamatsiana ny tsena anatiny.Nambaran’ny talen’ny Fambolena ao anatin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), Ramaroson Lantonirina, fa ilaina ny fifampitokisan’ny fanjakana sy ny tsy miankina, matoa natao ity atrikasa ity.Haverina ny fifaninanana mamboly varyNilaza koa izy fa manamora ny fanatrarana ny tanjona ny fanjakana, toy ny fametrahana ny lalàna sahaza, ny fananganana fotodrafitrasa toy ny fanajariana ny lemaka sy ny lakandrano, ny lalana, sns. Zavatra tsara koa ny famerenana ny fifaninanana mamboly vary, toy ny efa natao tany amin’ny 10 taona lasa, hamparisika ny tantsaha hampiakatra ny vokatra.Ho an’ny tsy miankina, nilaza ny filoha lefitry ny fikambanan’ny mpandraharaha malagasy (Fivpama), Razafiarison Andrianavalomanana, fa “efa nakana ny hevitry ny tsy miankina avokoa ny hevitra fonosin’ny “agri-business” fa ny fanatanterahana azy no tena andrasana”.Hisy atrikasa toy izao koa ho an’ny fiompiana sy ny jono atsy aoriana.Njaka A.L’article Fandraharahana ambanivohitra: hanampy voka-bary 500 000 t amin’ny taona 2020 a été récupéré chez Newsmada.
Tsimatimanota… mahamaty maty tsy manota vahoaka
Zandary 34 no hoe efa naiditra am-ponja noho ny fandikan-dalàna, firaisana tsikombakomba amin’ny dahalo, tafiditra amin’ny fakana an-keriny… 34 kosa ireo miaramila nidoboka am-ponja noho ny fanaovana herisetra sy vono olona, fanolanana, tsy fanajana zon’olombelona… Inona na ahoana koa ny manaraka?Tsy vaovao amin’ny toy izany, ohatra, ny eo anivon’ny polisim-pirenena. Tsaroana ny namonoan’ny polisy ny mpitsara Rehavana Michel tany Toliara, desambra 2010. Na ny fampijaliana sy fandoroana tanàna nafitsoky ny polisy 30 tany Antsakabary, Befandrina Avaratra, febroary 2017. Vitavita sy tsy hitahita ho azy.Izay ny fanta-bahoaka sy nahoraka ary nahabe resaka teo aloha, ankoatra ny raharaha hafa: afenina, tsy hadinodino, odian-tsy hita… Izay ny eo amin’ny fitandroana filaminana. Ahoana ny eo amin’ny sehatry ny fidintseranana, ohatra, ny fitantanam-bolam-panjakana, ny fananan-tany, ny fitanana ny lafintany, ny fampianarana… ?Toy izany koa ny sehatry ny fahasalamana, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy ny an-dranomasina, ny eo amin’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana, ny fitantanam-panjakana any ifotony…? Saika tratran’ny fahalovana avokoa tsinona ny sehatra rehetra hatramin’izay? Na manjaka ny kolikoly, ny tsy fanarahan-dalàna…Amin’izany rehetra izany, misy hatrany ny mihevi-tena ho tsimatimanota, ambonin’ny lalàna, lehibe tsy mba diso. Izay fisian’izay tsimatimanota izay no mampisy ny maty tsy manota. Tsy iza tsy aiza fa ny vahoaka ifotony any amin’ny tany lavitra fanjakana foibe: matimaty foana, mizaka any tsy eran’ny aina, iharan’ny jadona…Mba hitsimbadika amin’izay ny raharaha amin’izao hoe fiovana sy fanovana izao, tsy misy ambonin’ny lalàna, tany sy fanjakana tan-dalàna… ? Ialana amin’izay ny fahazarana sy tarazo ary fomba ratsy hatramin’izay. “Tsy ny fombanao no atao ho lalàna, fa ny lalàna no tokony ho fombanao”, hoy ny ohabolana danaoa iray izay.Rafaly Nd.L’article Tsimatimanota… mahamaty maty tsy manota vahoaka a été récupéré chez Newsmada.
Tsihombe : nampitomboina ny tanjaky ny herinaratra
Mazava ny tanàna! Tsy diso anjara amin’ireo reni­vohim-paritany 43 manerana ny Nosy misitraka ny hazavana an-dalambe ny tampon-tanànan’i Tsihombe, faritra Androy. Tonga tany an-toerana, ny alatsinainy 14 jolay teo, ny jirobe karazana Led Cobra, araka ny fampanantenan’ny filoha Rajoelina. Hanazava sady hanome endrika ny tanàna ireto fitaovana ireto, ary hisoroka ny tsy fandriampahalemana ihany koa. Mikasika ny mpanjifa mi­vantana, nampitomboan’ny Ji­rama ny tanjaky ny herinaratra mamatsy ny tanànan’i Tsi­hom­be, niaina tanaty delestazy nandritra ny volana maro. Natolo­tra tamin’io alatsinainy io ihany koa ny fitaovana mamokatra herinaratra miisa roa, manana tanjaka 220 KVA (175 KW), sy 165 KVA (132 KW), hanampy tosika ny efa any an-toerana. Tanjona amin’izao fizarana jirobe manazava tanàna sy fitaovana mamokatra herinaratra manerana ny tanàn-dehibe izao ny hanana angovo ampy ahafahan’ny vahoaka mamokatra mitondra fampandrosoana isam-paritra.Njaka A.L’article Tsihombe : nampitomboina ny tanjaky ny herinaratra a été récupéré chez Newsmada.
Dihy – Tantely Rajaobelina: “ Ny fifampikasohana sy ny serasera no mampivoatra”
Ny fijerena horonantsary miresaka dihy sy ny talenta ao anaty miampy fifampikasohana ary ny fanampian’ny namana no nampivoatra ny fahaizany, raha ny fanazavan-dRajaobelina Tantely Fitiavana Marcella. Nohamafisiny fa “fianarana foana ny fiainana ary hiezaka hatrany aho hampitombo ny talenta nomen’Andriamanitra, araka izay tratra, mba ho lasa matihanina tanteraka eo amin’ny tontolon’ny dihy… Na izany aza tsy hadinoina ny fifaneraserana fa tena anisan’ny manokatra lalana tokoa izy io”, hoy i Tantely, nanazava ny vinavinany sy taratry ny ho aviny eo amin’ny tontolon’ny dihy sy ny fampivelarana izany.Vao 15 taona monja, efa maro ny sehatra nandraisany anjara : tao amin’ny Kianja mitafon’ny Mahamasina, Lapany Tanànan’Antananarivo, indrindra ireo karazana “festival” natrehiny…Eo am-piketrehana ny seho amin’ny fahadimy taonan’ny fikambanana misy azy izy, ankehitriny. Miandry ny fepetra sy lamina apetraky ny fanjakana noho ny hamehana ara-pahasalamana sisa.Niditra anatin’ny fianarana dihy tao amin’ny Femal dancehall (Street I Dance, sns,. ka i Belly SID no nampianatra azy), izay anisan’ny nampivoatra an’i Tantely taminy dihy, indrindra moa fa ny gadona “Dancehall”. Fantatra fa mpikambana ao amin’ny tarika Rabefidihy i Tantely Rajaobelina, ankehitriny. Ny hizara sy hampita ho an’ireo zandry aty aoriana, ny dihy eto an-tanindrazana no tanjony ary maniry ny ho lasa lavitra eo amin’ny tontolon’ny dihy no mba nofinofiny…Misokatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra ny tenany, indrindra ny eo amin’ny tontolon’ny kanto malagasy.Narilala L’article Dihy – Tantely Rajaobelina: “ Ny fifampikasohana sy ny serasera no mampivoatra” a été récupéré chez Newsmada.
Ben’ny Tanàna Andriantsitohaina Naina: « Hotsinjovina ireo marefo amin’ny hetran-trano… »
Nambaran’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Andriantsitohaina Naina, omaly tetsy Analakely, fa efa tao anatin’ny tetibola efa an-taony maro ilay resaka hetran-trano. Tsy mbola nampiharin’ny mpitantana amin’izao fotoana izao izany. « Misy manodina resaka politika ilay izy. Mbola hodinihina amin’ny septambra ny hanovana ny hetra amin’ny fanamboarana trano… », hoy izy. Nanteriny fa tsy tokony handoavana hetra ny fanamboarana trano manodidina 10 tapitrisa Ar hanampiana ny olona hanamboatra ny tranony. Notsindriny kosa anefa fa misy orinasa lehibe manamboatra trano lehibe ka tokony handoa hetra… « Tsy mandeha ila io fa miezaka isika mitsinjo ireo marefo sady maka ny hetra amin’ireo tokony handoa izany », hoy ihany izy.Hampiana ny fotodrafitrasa, handeha ny fanentanana…Nitondrany fanazavana koa ny momba ny fehezam-pitsipika misahana ny fikoloana fahasalamana (CMH). « Lalàna efa teo io fa nohatsaraina hifanaraka amin’ny toetrandro. Ho hita eo ny fampiharana ny sazy. Mila mahafantatra ny fitsipika sy ny lalàna mifehy ny olom-pirenena. Efa anaty fandaharanasa ny fanorenana fotodrafitrasa », hoy izy. Anisan’izany ny fanampiana ny isan’ireo toeram-pidiovana, ny fanasan-damba. Eo koa ny dabam-pako miisa 1 500 hozaraina eny amin’ny fokontany. Atomboka ny fotodrafitrasa ary omena ny fitaovana arahin’ny fanabeazana sy ny fanentanana izany, araka ny nambarany.Notsiahiviny hatrany fa tsy tokony hanao ny saim-pantany ny rehetra. Tokony hisy ny lamina sy ny fitsipika manokana hifehy toy ny any amin’ireo tanàn-dehibe maneran-tany. Nohamafisiny fa mila fantatry ny mponina ny fitsipika, ny zo sy adidy ary ny sazy. Hanaparitaka izany ny eo anivon’ny FES hifanome tanana amin’ny CUA ka hipaka sy ho tsapan’ny mponina izany, araka ny nambaran’ny ben’ny Tanàna hatrany… « Vonona sy sahy ary manara-dalàna ny olom-pirenena mendrika. Mandray andraikitra amin’ny manodidina. Hiaraka isika hamerina ny hasin’Antananarivo », hoy izy.Synèse R.L’article Ben’ny Tanàna Andriantsitohaina Naina: « Hotsinjovina ireo marefo amin’ny hetran-trano… » a été récupéré chez Newsmada.